Saraakiishii la afduubtay oo la helay iyagoo nool | Wardoon
Home Somali News Saraakiishii la afduubtay oo la helay iyagoo nool
Saraakiishii la afduubtay oo la helay iyagoo nool
Labo sarkaal oo ka badbaaday weerarkii shalay lagu dilay saraakiil katirsanaa ciiddamada xoogga, ayaa lagu guulaystay in lasoo badbaadiyo iyagoo nool kadib markii ciidamadii katirsanaayeen ay illaa xalay ka baadi goobayeen goobtii uu weerarku ka dhacay.
Saraakiisha la helay ayaa lagu kala magacaabaa labo xiddigle Qalbi Indha taag iyo gaashaanle Warsame Xassan, waxayna ka tirsanaayeen Qaybta 21-aad ee ciiddanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Falka lagu laayay saraakiisha ayaa ugub ku ah deegaanada Galmudug oo inta badan ay ka dhacaan dilal ku salaysan aanooyin qabiil, kuwaas oo maaro loo layahay.
Saraakiisha la laayay oo kasoo jeeda Balanbale, ayaa kamid ahaa ciiddamo iyo saraakiil uu tababar ugusoo xirmay degmada Dhuusomareeb, waxaana weerarka lala beegsaday xilli ay kusii jeedeen degaanadooda.
Previous articleDAAWO:-“Madaxweynaha Afar sano ayuu seydinimo ku joogay oo wax haleynaayay”
Next articleDAAWO:-Taliyihii ciiddanka Danab oo lasiidaayay
DAAWO:-Odayaasha Muddulood oo ka digay in la boobo lacag dhawaan lagu...
Akhriso:-Lixda Xildhibaan Ee Maanta Lagu Doortay Kismaayo